Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 19
Inona no atao hoe fahamasinana na fampodiana amin'ny maha-Zokiny farany indrindra?
Ny teny hoe tonga nofo dia midika hoe izay tonga tao amin’ny vatana nofo. Ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo dia midika hoe andriamanitra amin'ny endriky ny nofo. Ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo dia iray amin'ny fisehoan'ny maha Andriamanitra amin'ny endrika olombelona, ​​izay fahasambarana na Andriamanitra tonga nofo araka ny iantsoana azy ireo, dia voatonona tamin'ny tantaram-pinoana lehibe rehetra. Ny fisehoan'ny fahatongavan'Andriamanitra nofo ho nofo dia manatrika ny fananganana fivavahana vaovao, izay miseho amin'ny endrika olombelona, ​​izay miseho na manana ny anarany nomen'ny mpanaraka azy avy eo. Philosophically, God, Universal Mind, na Andriamanitra, dia mpampiantrano ny fahiratan'Andriamanitra izay tsy takatry ny vatana vaovao intsony ary mihoatra ny fahalemena sy ny fahalemen'ny olombelona rehetra. Ity vondron'ny faharanitan-tsaina izay avy amin'Andriamanitra ity indraindray dia lazaina ho Logos. Amin'ny vanim-potoana fehezin'ny lalàna, ny iray amin'ireo mpampiantrano masina, na Universal Mind, na Andriamanitra, dia miseho eto an-tany hanampy ny zanak'olombelona amin'ny fivoarany sy amin'ny fivoarany mankany amin'ny tsy fahafatesana sy ny maha-Andriamanitra. Rehefa misy trangan-javatra toy izany dia lazaina fa ny fahatongavan'ny mpamonjy avatar, ny Logos, ny Demiurgos, ny saina manerantany, ny andriamanitra, ny fanahy lehibe na Andriamanitra, araka ny fitenin'ny olona mirakitra ny zava-nitranga. . Misy filozofia be dia be mifandraika amin'ny hetsika toy izany, ary misy ambaratonga sy karazana nofo aman-janahary. Saingy ny famaliana manokana ny fanontaniana momba ny fahatongavan'Andriamanitra ho zava-masina dia ny iray amin'ny mpampiantrano masina no nitoetra niaraka tamin'ny olombelona mety maty izay madio sy mivoatra, ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy, hanomezana ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
Inona ny fampiasana na ny asan'ny vatan'ny pitipoa?
Ny fisiôlôjika, ny fahatakarana be indrindra momba ny vatan'ny pituitary dia ny seza eo an-toerana na ivon'ny rafi-pitatitra. Misy lobaka roa misy azy, ny afon-jaza aforitra izay mahazo ny fihetseham-po rehetra amin'ny vatana avy amin'ny nerve sensory, ary ny fitrohana an-tendrony dia avy amin'ny toerana itantanana ny andilovan'ny môtô. Izahay dia milaza fa ny vatana pituitary dia ny fon'ny rafitry ny rafi-pitatitra, tahaka ny fo hozatry ny hozatra dia ny ivon'ny rafi-pandehanana. Satria ny rà mikoriana avy ao am-po amin'ny alàlan'ny vatana amin'ny alàlan'ny fihenjanana ary miverina amin'ny alàlan'ny lalan-drà mankany am-po, dia misy tsiranoka mikoriana na eterika izay mivezivezy amin'ny vatana avy amin'ny vatana pituitary amin'ny alàlan'ny lalan-dra. miverina amin'ny taova sensory amin'ny vatana pituitary. Ny vatana pituitary no ivony ao amin'ny atidoha izay ifandraisan'i Ego olombelona amin'ny vatana ara-batana, ary io no ivotooan'i Ego olombelona mandalo amin'ireo fanjakana fantatra amin'ny hoe mifoha, manonofy ary torimaso lalina. Rehefa ny olona Ego dia mihetsika mivantana na miaraka amin'ny vatan'ny olona iray dia lazaina fa mifoha ary hahatsapa ny vatany sy ny tontolo manodidina azy. Rehefa miala aina avy eo ny fifandraisana Ego na ny fifehezana ny vatan'ny pituitary dia manao izany mba hialan'ny vatana sy hamerenan'ny herin'izao tontolo izao izay mivoaka ao anaty vatana, rehefa tsy mifangaro amin'ny fihenjanana nateraky ny fihenjanana. amin'ny alàlan'ny fiasan'ny saina miaraka amin'ny vatana pituitary. Raha ny saina na i Ego dia mihazona ny fihazonany ny vatana pituitary ary miverina eo afovoan'ny ati-doha hafa, ny nofinofy, ary ny torimaso lalina sy ny toe-javatra eo anelanelan'izy ireo.
Inona ny fampiasana na ny asan'ny pineal?
Ny vatana pituitary sy ny glandre pineale dia taova izay ivon'ny fifandraisan'ny ain'ny olona. Saingy ny vatana pituitary no ivony izay ampiasain'ny sain'olombelona amin'ny zavatra rehetra mitaky fandidiana ara-tsaina, ny glandre pine dia ny taova izay ifandraisan'ny maha-olona ambony sy ambony kokoa ny olombelona. Ny vatan'ny pituitary dia ampiasaina amin'ny fizotran-javatra rehetra sy ny asa ara-tsaina izay mitaky ny hetsika fanaon'ny fanjohian-kevitra. Ny glandan'ny pineal dia ampiasaina rehefa ilaina ny fahalalana mivantana ny zavatra iray. Ny kelin'omby dia ny taova izay ampidirina amin'ny fahatakaran'ny zanak'olombelona fa ny fahalalana sy ny fahendrena izay tanteraka ao aminy, aharihary ny tenany, tsy misy fisainana. Ny glandre pine dia ny taova izay ampiasain'ny saina manana fahendrena sy fahendrena. Mihatra amin'ny olon-kendry ara-panahy izany. Ho an'ny olombelona tsotra dia ampiasaina ny vatana pituitary raha tsy eo ny fahalalany azy araka ny tokony ho izy fa tsy hainy ny fomba fiheviny. Amin'ny olon-tsotra dia ny maso kelin'olombelona dia vavolombelona manambara ny mety hiseho amin'ny maha-Andriamanitra ny ho avy. Fa amin'izao fotoana izao dia mangina toy ny fasana ihany.
Inona no fampiasana na fihenan'ny kalsa?
Ny spleen dia iray amin'ireo ivon'ny ivon-taolana astral na forme. Ny lela dia manompo indrindra eo am-piandohana mba hametrahana ny fifandraisana eo amin'ny molekiola, astral endrika vatana mankany amin'ny rafitry ny sela ara-batana, amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fizaran-tany. Izy io dia mifandraika amin'ny fandehanan'ny ra sy ny rafitra lymphatic. Aorian'ny fametrahana ny vatany amin'ny fahazarany ary azo antoka ny endrik'ilay vatana, dia azo atao ny mampivily azy satria ilay vatam-panondroana astral dia mipetraka amin'ny faritra rehetra ao amin'ny vatana.
Inona no fampiasana na fiasan'ny tosidra kely?
Ny glandida tiroida dia iray amin'ireo ivon-toerana ao amin'ny vatana izay anaovan'ilay olona mandray andraikitra ny vatana alohan'ny fiterahana. Mifandray mivantana amin'ny vatana pituitary izy io ary fitahirizan-drano na fitahirizana bateria izay manafaka ny fanafody simika ilaina amin'ny rafitry ny vatan'ny vatana, ary mitazona tincture izay miasa amin'ny ra koa. Ny glandine tiroida dia singa iray izay asehon'ny saina ao amin'ny vatana. Ny glandida tiroida, vatana pituitary ary glandine pineal dia misy ifandraisany amin'ny firafitry ny bony amin'ny vatana sy ny saina. Rehefa misy fiantraikany ireo glandela ireo dia manelingelina ny hetsika ara-dalàna ao an-tsaina ary amin'ny toe-javatra maro dia miteraka fahafatesana na misy fiantraikany betsaka ao an-tsaina toy izany ka mahatonga ny tsy fahatongavan-tsaina na fanelingelenana ny saina.